अझै पनि भएन हुप्राचौर सफा - हेटौंडा टुडे
अझै पनि भएन हुप्राचौर सफा
२९ पुष २०७८, बिहीबार ११:३९
हेटौंडा – सुन्दर बजारले परिचित भएको ठाउँ भनौ वा बागमती प्रदेशको राजधानि हेटौंडा भनै धेरै समय अघि देखि फोरोरले अस्त व्यस्त भएको छ । हेटौंडामा रहेको हुप्राचौर खेलमैदान फोहोरको कारण अझ धेरै एक चर्चाको विषय समेत बन्न पुगेको छ ।
हुप्राचौरमा १ महिना बित्दा समेत पनि त्याँहाको फोहोर व्यबस्थापन हुन सकेको छैन । हुप्राचौरको फोहोर व्यबस्थापन नभएको झन्डै १ महिना भईसको छ । यि फोहोर नियन्त्रण नहुँदा हुप्राचौर खेल मैदानबाट फोहोर मैदानमा परिणत हुन लागेको छ ।
बिभिन्न खेलहरु भइरहँदा समेत पनि त्याहाँको सरसफाई भने हुन सकेको छैन । फोहोर व्यबस्थापनको लागि नगरपालिकाले फोहोर बोक्ने गाडि सञ्चालनमा ल्याय पनि हुप्राचौरको अवस्था हेर्ने हो भने नगरपालिकाले पनि कम चासो राखेको पाइन्छ ।
प्रदेश सरकार रहेको हेटैंडा बजारमा अब कहिले देखि होला त फोहोर व्यवस्थापन ? सम्बधिन्त निकायले कहिले देख्ला यो फोहोर ? खेल हेर्नको लागि मान्छेहरुको भिड लाग्ने यो मैदानमा सरसफाई गर्नेको भिड कहिले लाग्ला त ? फोहोर कै कारण यस्तै यस्तै प्रश्नहरु पनि उठ्न थालेको छ ।
फोहोरले गर्दा चर्चामा रहेको यो खेल मैदान छिटै शुन्दर बनाउनको लागि सबै मिलि सफा गर्न पनि देखिन्छ । यसको लागि सम्बधिन्त निकायले बढि ध्यान दिनुपर्ने समेत देखिन्छ ।